सुनको भाउ ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको मुल्य – Sandesh Munch
सुनको भाउ ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको मुल्य
October 28, 2020 633
काठमाडौं। पछिल्ला केहि महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ एकैदिन ७ सय रुपैयाँले घटेको छ ।शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुन तोलाको ९५ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
बुधबार पनि सुन तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ५ सय रुपैयाँले कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।आज चाँदीको मुल्य भने घटेको छ । बिहिबार चाँदी प्रतितोलामा १० रुपैयाँले घटेर १ हजार २ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार कारोबार भइरहेको छ ।
वास्तुशास्त्र अनुसार केही यस्ता चिज छन्, जुन तपाईले सधै पर्समा राख्नुभयो भने पैसाको कमी हटेर जान्छ। पैसा हातमा नटिक्ने धेरैको समस्या हुन्छ। यस्ता केही चिज छन्, जुन चिस पर्समा राख्दा पैसाको समस्या हटेर जान्छ।
लक्ष्मी माताको फोटो:
वास्तुशास्त्र अनुसार पर्समा धनकी देवी लक्ष्मीको फोटो राख्दा पर्स कहिलै खाली हुदैन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बास्तुशास्त्र अनुसार चामल शुक्र ग्रहसँग रिलेटेड अन्न हो। त्यसैले भगवान् लक्ष्मीलाई चढाएको सानो एक पोका चामल सधै आफ्नो पर्समा राख्नुहोस् तपाईको धन सञ्चित हुनेछ ।
बास्तशास्त्रमा श्रीयन्त्रलाई लक्ष्मीको स्वरुप मानिन्छ। त्यसैले सधै आफ्नो पर्समा सानो आकारको श्रीयन्त्र राख्ने गर्नुहोस्।
गुरुको फोटो :
पर्समा सधै आफ्नो गुरुको फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। यसले जीवनमा सकारात्कम प्रभाव पर्दछ र काममा सफलता मिल्दछ।
लक्ष्मीसँग सम्बन्धीत दोस्रो बस्तुः
तपाईले आफ्नो पर्समा भगवान् लक्ष्मी मातासँग सम्बन्धीत दोस्रो बस्तु राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसले तपाईको धन हानी हुनबाट बचाउछ।
यी बाहेक तपाईले आफ्नो पर्समा समुद्री कौडा, कमल गट्टा, चाँदीका सिक्का पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यी बस्तु राख्दा तपाईको जीवनमा सकारात्मक पैदा हुन्छ र धन सम्बन्धी विषयमा सुधार आउने गर्दछ।
Prevज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीले गरे कोरोनाको भविष्यवाणी | नेपालमा कहिलेसम्म यस्तो महामारी ?
Nextपाथिभरा माताको दर्शन गरी आज – १३ कार्तिक बिहिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
नेपाली भूमि हडपेकोमा मोदीका लागि खतराको घण्टी : भारतियले नै सुरु गरे चर्को बिरोध
आज – ०२ आश्विन २०७७ शुक्रवार को राशिफल
यी ६ खाना धेरै नखानुहोस, नत्र चाडै नै तालु खुइलेला,
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84122)